Accueil > Gazetin'ny nosy > Madagasikara: Lany andro amin’ny fikaonan-doha
Madagasikara: Lany andro amin’ny fikaonan-doha
Isan’andro isan’andro dia mahatratra roa raha kely indrindra ny fikaonan-doha ataon’ny manam-pahaizana sy ny fanjakana Malagasy ary ireo sehatra iraisam-pirenena izay manampy an’i Madagasikara. Raha nisaina izy ireny dia eo amin’ny 400 isan-taona amin’ny ankapobeny. Tsy eto Antananarivo irery no ahitana izany fivorivoriana izany fa saika manerana ny faritra maro koa. Misy aza no lanin’ny fikaonan-doha ity ny teti-bola natao hampandrosoana sehatra iray. Ny ampahany kely dia kely sisa no anatanterahana ny asa fampandrosoana tokony ho tanterahana amin’ny vola natokana ho amin’izany. Lasa mamelona ny hôtely lehibe isan-karazany indray izy ireny.
Ny fikaonan-doha ara-toekarena no be indrindra amin’izany ary manaraka azy eo ny raharaha pôlitika. Ny sehatra roa ireo no antoka ny fampandrsoana amin’ny firenena iray. Ny mahagaga nefa dia lasa isan’ireo firenena faran’izay mahantra indrindra i Madagasikara ankehitriny.
Tsara dia tsara ny miady hevitra sy manao fikaonan-doha ary tena ilaina izany, nefa raha toa ka tsy hitondra fampandrosoana izany dia inona no ilaina azy ? Na dia manana olona manam-pahaizana toa inona isika Malagasy, nefa tsy hay ny mampihatra izany dia tsy misy liana izany velively fa mitovy amin’ny bado tanteraka.
Arakaraka ny nanaovana fikaonan-doha sy nampahay ny Malagasy no naharatsy ny fitondrana teto Madagasikara. Toa izany koa ny fanjakan’ny kolikoly isaka ny sehatra rehetra ary ny fanodinkodinana volam-bahoaka.
Ny tena zava-doza amin’izao fotoana izao dia ny fandraisan’ny tanora sy ny taranaka izany ho môdely amin’ny fiainany. Tao anatin’ny 20 taona izay dia ohatra ratsy no nampiainan’ny mpanao pôlitika Malagasy ny vahoaka. Forokotan’olona no lasa mpanao pôlitika Malagasy. Olona fetsifetsy sy mpangalatra ary tsy mitazona ny teny nomeny no lasa mpitondra fanjakana. Vokatr’
izany dia ny harem-pirenena sy ny kitapom-bolam-panjakana no natao tantely afa-drakotra.
Fotoanan’ny fifidianana izao ka mila mandinika tsara ny Malagasy vao manapa-kevitra satria ahiana mafy ny mbola hitohizan’izao fiainana ratsy dia ratsy izao.
Politika: Ny volana jona no hivoaka ny lalàm-pifidianana ?
Maloto tena raharaha maloto, izany no ady hevitra politika teo anivon’ny mpandinika ny raharaham-pirenena ankehitriny. Tena lalaovin’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM (Hery vaovao hoan’i Madagasikara) tanteraka vahoaka malagasy. Tsy vitan’izany hoy ireo mpanao politika tafaresaka momba ny raharaham-pirenena ankehitriny fa sendra izay olona fetsy tanteraka ny malagasy ka antonatonany sy rebirebeny.
Raha ny lalàmpanorenana no arahina dia ny volana oktobra na novambra 2018 dia miroso amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena isika. Ny fiantsoana ny mpifidy araka ny lalàna koa dia tsy maintsy telo volana alohan’io fotoana io. Ny volana jolay 2018 izany vao mety hivoaka ny lalampifidianana izay andrasan’ny maro amin’izao fotoana izao. Tena ao anatin’ny lalàna marina izany hevitrin’ny HVM sy ny fitondrana entin’ingahy HeRY Rajaonarimampianina izany. Io filalaovana ny lalàna io nefa no tena kilalao maloto ao anatin’ity raharaha ity satria natao izay tsy hisian’ny Malagasy hiomana amin’izany fifidianana izany. Tsy afaka mihetsika raha tsy mivoaka ity lalàmpifidianana ity satria io no mamaritra ny zavata rehetra.
Tsy afaka mihetsika ny antoko politika sy ny olona izay mieritreritra ny hilatsaka hifaninana amin’izany fifidianana izany amin’izao fotoana izao noho izany. Na dia efa nanambara aza ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena tamin’ny volana janoary 2018 teo fa tena hisy ny fifidianana filohampirenena amin’ity taona ity, dia mihazohazo tanteraka ny olona rehetra satria tsy misy lalàna harahana amin’izany.
Ankilany indray nefa dia efa manao izay danin’ny kobony tanteraka ny antoko HVM sy ny mpikambana ao amin’ny governemanta manao fampielezan-kevitra manerana ny Nosy. Izay zavatra mitranga ka azo tenenina sy azo sehosehoana amin’ny alalan’ny fitondram-panjakana dia hararaotiny avokoa. Mandeha irery ankehitriny ny antokom-panjakana amin’ny fanomanana ny fifidianana. Ny filankevitrin’ny governemanta izay natao tamin’ity herinandro ity dia manamafy izany satria ny governemanta sy ny mpikambana HVM ihany no mahalala ny votoaton’izany. Izany no ilazana fa kilalao maloto tanteraka no ataon’ny fanjakana amin’ity famoahana ny lalàmpifidianana ity. Ny Ceni (Vaomieram-pirenena mahaleon-tena momban’ny fifidianana) aza dia nanambara fa sahirana mafy noho izany, ka raha toa sanatria ka tsy hisy io lalàna io dia ny lalàna tamin’ny fifidianana hoan’ny filoham-pirenena hoan’ny repoblika faha efatra tamin’ny taona 2013 ihany horaisina. Efa tena fahadisoam-panatenana tanteraka izany ary efa fialana bala amin’ny vahoaka ny tsy fetezan’ity raharaha ity intsony.
Mihiboka manao fivoriana manokana any Mantasoa ny fanjakana tarihin’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny HVM nanomboka omaly ka tsy maintsy ny mahakasika ny fomba handresena amin’ny fifidianana filoham-pirenena io no isan’ireo tetika horaisina amin’izany. Ny mpandinika ny raharaha ankehitriny dia tsy manantena fa hisy ny fampitam-baovaoa hoan’ny Malagasy mikasika izany fa hijanona hoan’ny mpitondra ihany izany na dia nolazaina aza fa hikasika ny raharaham-pirenena.
Toa ny zavatra niainana hatramin’izay repoblika faha efatra izay dia mbola ho laingalaingana sy hofitapitahina indray ny Malagasy amin’ity fifidianana hoavy ity. Natao koa izao mba tsy hahazoan’ny olona hailika tsy handray anjara amin’ny fifidianana, ka tsy ho afaka hitarika olona hanohitra izany intsony satria ahodina any amin’ny fanomanana ny sain’ny maro.
Marihina fa mandeha dia mandeha ny resaka fa mety hisy ireo filoha teo aloha no atao izay tsy hahazooany milatsaka mihitsy. Mampanahy mafy ny hisian’ny fitoniana amin’ity fifidianana hoavy ity noho ny tsy fisian’ny mangaraharaha ataon’ny mpitondra.